Kuthetha ukuthini ukuphupha inyama? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuphupha inyama ngokubanzi yinto ebalaseleyo, kuba ukusukela kumaxesha amandulo ayimeli kuphela intabalala yezinto, kodwa kunye nolonwabo, impumelelo kunye nokuchuma.
Ngaba uphuphe nje inyama? Qhubeka nokufunda inqaku kwaye ufunde ngakumbi malunga nephupha lakho.
1 Ukuba inyama iphekwe kakuhle, yonwabile!
2 Ukuphupha inyama eluhlaza
3 Ukuphupha inyama ebolileyo
4 Ngaba inyama sele ikhutshwe kwisilwanyana?
4.1 Olunye utoliko olunokwenzeka.
Ukuba inyama iphekwe kakuhle, yonwabile!
Ngenxa yokuba eli phupha lihle kakhulu, kuba libonisa kuphela ukuba ngexesha elifutshane wena okanye umntu osapho lwakho uya kuba nentabalala yemali kwaye uya kuba nakho ukuwafezekisa onke amaphupha osapho. Ngokubanzi, nokuba le ntabalala ayijoliswanga kuwe, uya kufumana uhlobo oluthile lwesibonelelo. Tyhila!
Ukuphupha inyama eluhlaza
Ukuba inyama ibiluhlaza, sowuza kufumana inkanuko engathethekiyo! Ngokwenxalenye oku kulungile kakhulu, kuba ngubani ongafuniyo ukufumana uthando kwezona zinto zinomdla? Nangona kunjalo, ngakumbi ukuba ungumntu ozinikeleyo, lumka ungabikho ekungcatshweni okunokukufaka engxakini. Kwimeko apho, lichaze eli phupha njengomqondiso osisilumkiso.
Ukuphupha inyama ebolileyo
Abantu abaninzi abaphupha inyama ebolileyo, bade bachukunyiswe kukubonakala okucekisekayo komsebenzi, bakholelwa ukuba into embi izakwenzeka. Nangona kunjalo, intsingiselo yahluke kakhulu. Olu hlobo lwamaphupha lubonisa kuphela umntu ophuphayo ukuba umjikelo omnye uphelile kwaye omnye sele eza kuqala.
Umzekelo, ukuba ukhe wadlula kwimidlalo yothando, iphupha elo ke libonisa ukuba ixesha lifikile lokungcwaba konke oko kuxinezelayo, kuba kuza kuza uthando olutsha. Kwaye oko kuya kwezemali okanye naluphi na olunye uhlobo lwesihloko.
Ngaba inyama sele ikhutshwe kwisilwanyana?
Olu hlobo lwamaphupha nalo luyamothusa umntu, kuba akumnandanga ukubona isilwanyana sixhelwa emva koko ubone inyama yaso iphazanyisiwe. Ngayiphi na imeko, eli lelinye iphupha lokwazisa, ubukhulu becala lokujonga ngakumbi abantu kwindawo yakho yosapho okanye kwisangqa sabahlobo.
Okwangoku, olu hlobo lwamaphupha lukwaveza ukuba ukuba uthatha amanyathelo afanelekileyo kwaye uhlale uphaphile, uyakuba yimpumelelo, oko kukuthi, akukho mntu uya kuba nakho ukukukhohlisa.
Ukuba isilwanyana ekuthethwa ngaso ngumntu, ngokungaqhelekanga, oko kuthetha ukuba umntu obusoloko umthembile angazama ukukulahlekisa ngenzuzo yemali.
Olunye utoliko olunokwenzeka.
Ukongeza kwimeko yenyama, ezinye iimeko zifanelwe kukuqwalaselwa, ezinje:
Uphuphe utya inyama kwaye ibumnandi?
Uphuphe utya inyama yona imbi?
Ukuba inyama ibimnandi luphawu lokuba intabalala iza kuza ngokukhawuleza! Ukuba ibimbi, inokuthatha ixesha ukufika, kodwa izakufika. Ukuthenga inyama kuthetha nje kabini!